SocialBee: द्वारपालक सेवाहरूको साथ सानो व्यवसाय सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म | Martech Zone
धेरै वर्षहरूमा, मैले ग्राहकहरूको लागि दर्जनौं सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू लागू र एकीकृत गरेको छु। मेरो अझै धेरैसँग राम्रो सम्बन्ध छ र तपाईंले मलाई नयाँ र अवस्थित प्लेटफर्महरू प्रवर्द्धन गरिरहेको देख्नुहुन्छ। यसले पाठकहरूलाई भ्रमित पार्न सक्छ... म किन सबैका लागि एउटै प्लेटफर्मलाई सिफारिस र धक्का दिँदैन भनेर सोच्दै। म होइन किनभने प्रत्येक कम्पनीको आवश्यकताहरू एक अर्काबाट भिन्न हुन्छन्।
त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू छन् जसले व्यवसायहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ ... तर तपाईंको लक्ष्यहरू, रणनीति, दर्शकहरू, प्रतिस्पर्धा, प्रक्रियाहरू, प्रतिभा, बजेट, टाइमलाइन, तपाईंको स्ट्याकमा अन्य प्लेटफार्महरू... सबैले विक्रेताहरूमा ठूलो भूमिका खेल्छन् जुन तपाईंले लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले लक्ष्यको ट्यागलाइनमा छ Martech Zone अनुसन्धान, सिक्न र आविष्कार हो। मैले तपाईंको व्यवसाय नबुझेसम्म त्यहाँ अर्डर समाधानहरू श्रेणीकरण गर्न सक्दिन। सही समाधान तपाईको व्यवसायको लागि मैले अर्कोको लागि सिफारिस गरेको भन्दा विपरीत हुन सक्छ।
SocialBee: Solopreneurs, साना व्यवसायहरू, र तिनीहरूलाई सेवा गर्ने एजेन्सीहरूको लागि
सोशलबी सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन प्लेटफर्म हो जसले सामाजिक च्यानलहरू मार्फत सामग्री सिर्जना र साझेदारीमा केन्द्रित छ। यो प्लेटफर्म एकल व्यवसायी, साना व्यवसाय र एजेन्सीहरूलाई उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्न तालिम र वैकल्पिक द्वारपालक सेवाहरूको साथ आउँदछ भन्ने कुरामा कम्पनी अद्वितीय छ। तपाईंले प्लेटफर्म मात्र प्राप्त गर्नुभएन, तर तपाईंले सामग्री निर्माण, विज्ञापनहरू, सामुदायिक वृद्धि, र थप कुराहरूमा मद्दत गर्न पूर्ण रूपमा समर्पित विशेषज्ञहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ।
SocialBee प्लेटफर्म सिंहावलोकन
भित्र सामग्री साझेदारी फोकस सोशलबी साँच्चै एकदम अद्वितीय छ, सुविधाहरू समावेश:
सामाजिक मिडिया सामग्री कोटिहरू - कोटीहरूले तपाईंलाई सामग्रीको राम्रो मिश्रण प्राप्त गर्नका लागि पोस्टहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई समयतालिकाको राम्रो नियन्त्रण प्रदान गर्दछ, प्रत्येक नेटवर्कको लागि अनुकूलन, भिन्नताहरू उत्पादन, बल्क सम्पादन, र पुन: लाइनिङ। तपाईं पज वा विशेष कोटीहरू चलाउन पनि सक्नुहुन्छ।
सामाजिक मीडिया प्रकाशन - प्रोफाइल वा प्लेटफर्म द्वारा बचत गरिएको ह्यासट्यागहरूको साथ तपाईंको सोशल मिडिया पोष्टहरू डिजाइन र पूर्वावलोकन गर्नुहोस्। प्लेटफर्मले बाहिर खडा हुन इमोजीहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ। तपाईं मार्फत पोष्टहरू आयात गर्न सक्नुहुन्छ CSV, आरएसएस, Quuuवा पकेट.
सोशल मिडिया एकीकरण - तपाईंको फेसबुक प्रोफाइल, पृष्ठहरू, र समूहहरूमा प्रकाशित गर्नुहोस्। Twitter मा प्रकाशित गर्नुहोस्। तपाइँको LinkedIn प्रोफाइल र तपाइँको कम्पनी पृष्ठहरूमा प्रकाशित गर्नुहोस्। Instagram मा छविहरू, carousels, वा भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहोस्। Google My Business मा पोस्ट गर्नुहोस्।
सामाजिक मिडिया तालिका - तपाईंको क्यालेन्डर हेर्नुहोस्, विशिष्ट समयमा पोस्ट गर्नुहोस्, एक निश्चित मितिमा वा धेरै सेयरहरू पछि आवश्यक पोस्टहरूको म्याद समाप्त हुन्छ। प्रत्येक प्रोफाइलको आधारमा व्यक्तिगत रूपमा तालिका बनाउनुहोस्।
इमेल सूचनाहरू - जब पोस्टहरू असफल हुन्छन्, जब आयात पूरा हुन्छन्, वा तपाईंको कोटी लाम खाली हुँदा सूचित गर्नुहोस्।
एनालिटिक्स - URL छोटो (Rebrandly, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) र श्रेणी-आधारित संयोजन गर्नुहोस्। UTM सेटिङहरू आफ्नो सामग्री प्रदर्शन ट्र्याक गर्न।
एउटा SocialBee डेमो बुक गर्नुहोस्
यहाँ प्लेटफर्म को एक भिडियो सिंहावलोकन छ:
SocialBee द्वारपाल सेवाहरू
चाहे तपाईं आफ्नो व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ सामाजिक मिडिया रणनीति वा तपाईंको ग्राहकको रणनीतिहरू, सोशलबी मासिक सामाजिक मिडिया सेवा प्याकेजहरूको संख्या प्रदान गर्दछ, सहित:
सामाजिक सामग्री निर्माण -सामाजिक मिडिया तपाईको मार्केटिङको एक महत्वपूर्ण भाग हो, विशेष गरी यदि तपाई ध्यान आकर्षित गर्न र जागरूकता निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा ठोस उपस्थिति निर्माण गर्ने पहिलो चरण भनेको नियमित रूपमा उच्च गुणस्तरीय र भिजुअली-अपील गर्ने सामग्री साझा गर्नु हो।
सामग्री मार्केटिङ - सामग्री सिर्जना गर्नाले तपाईंलाई सम्बन्धहरू निर्माण गर्न र तपाईंको वर्तमान ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूसँग वफादारी र विश्वास सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछ। यसबाहेक, राम्रोसँग सम्पन्न सामग्रीले तपाइँको वेबसाइटमा ट्राफिक उत्पन्न गर्दछ र तपाइँको नेतृत्व उत्पादन प्रक्रियामा एक प्रमुख कारक बन्छ।
संलग्न वृद्धि - तपाइँको व्यवसाय वरिपरि एक समुदाय निर्माण गर्न 1-मा-1 सम्बन्धलाई बढावा दिंदा भुक्तानी हुन्छ! समुदाय प्रतिक्रियाको उत्कृष्ट स्रोत मात्र होइन तर सही रूपमा निर्माण गरिएको खण्डमा, तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूलाई भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरू र पछि वफादार अधिवक्ताहरूमा बदल्न सक्नुहुन्छ।
अधिग्रहण र प्रवर्धन - सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन प्रयासहरूले तपाइँको पहुँचलाई बढाउँदैन र तपाइँलाई धेरै च्यानलहरूमा तपाइँको सन्देश साझा गर्न सक्षम बनाउँछ, तर तिनीहरू कुनै पनि बजेटमा फिट हुन्छन् र मापन गर्न सजिलो छ। साथै, तपाइँ विशिष्ट लक्ष्यीकरण मापदण्डमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुन्छ।
र, यदि तपाइँलाई सुरु गर्न केहि सहयोग चाहिन्छ भने, SocialBee ले तपाइँको सबै सामग्री माइग्रेट गर्नको लागि फ्ल्याट-शुल्क प्याकेज प्रदान गर्दछ। सोशलबी वा तपाइँ नयाँ सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हामी तपाइँलाई प्रारम्भिक सेटअप संग मद्दत गर्न सक्छौं। तपाइँको सबै सामग्री र अघिल्लो सेटिङहरू SocialBee मा स्थानान्तरण गर्नदेखि, तपाइँको लागि तालिका बनाउन सम्म, तपाइँ हामीमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ!
SocialBee सेवाहरू बारे थप जान्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध हुँ सोशलबी र म यस लेखमा सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गर्दैछु।
टैग: सायदBL.INKसामग्री मार्केटिङसामग्री मार्केटिङ सेवाहरूcsv सामाजिक सञ्जालमाफेसबुकफेसबुक समूहफेसबुक समूह प्रकाशनफेसबुक पेजफेसबुक पेज प्रकाशनफेसबुक प्रोफाइलगुगल मेरो व्यापारगुगल मेरो व्यापार प्रकाशनइन्स्टाग्रामइन्स्टाग्राम प्रकाशनJotURLLinkedin कम्पनी पृष्ठLinkedin कम्पनी पृष्ठ प्रकाशनPixelMeजेबquuरिब्रेन्डलीरिप्लग गर्नुहोस्RocketLinkआरएसएससाना व्यापारसानो व्यापार एजेन्सीसामाजिक मीडिया विज्ञापनसामाजिक मिडिया सामग्री निर्माणसामाजिक मिडिया वृद्धिसामाजिक मिडिया एकीकरणसामाजिक मिडिया प्रकाशनसामाजिक मिडिया तालिकासामाजिक मिडिया सेवाहरूसामाजिक मिडिया रणनीतिसामाजिक मिडिया प्रशिक्षणसामाजिक माहुरीtwitterurl छोटो पार्ने
WP All Import: CSV बाट WordPress मा एक श्रेणी वर्गीकरण कसरी बल्क आयात गर्ने